Fananganana sy fambolena - AOOD Technology Limited
Ny peratra slip izay ampiasaina amin'ny fitaovana fananganana sy fambolena dia tsy maintsy manana rafitra matanjaka sy fahombiazana azo ianteherana noho ireo milina mavesatra ireo izay mazàna miasa eo ambanin'ny tontolo iainana masiaka. Ny peratra slip dia singa iray manan-danja amin'ireo rafitra sarotra ireo izay mila famindrana ny hery rehetra, ny famantarana, ny angona avy amin'ny rafitra mijanona amin'ny rafitra mihodina, tsy maintsy mandresy ireo tontolo iainana mitaky asa sy miasa tanteraka amin'ny karazana tontolo iainana izy io, ary mila mahafeno fepetra amin'ny adidy lava. miasa ny faribolana.
AOOD dia natokana hamahana ny herinaratra, ny fambara ary ny fandefasana angona ho an'ny tontolo mitaky. Injeniera manam-pahaizana sy teknolojia famokarana tsy manam-paharoa no ahafahan'ny AOOD manome rafi-pahefana mavesatra ho an'ireo fitaovana mavesatra ireo. Ohatra:
● Kodiarana kapila tsy tantera-drano ho an'ny fonosana baler
● refy lehibe amin'ny alàlan'ny peratra slip slip ho an'ny mixer simenitra
● Vovon-tsolika fanoherana ny hovitrovitra sy ny fahatairana amin'ny fitaovana fitrandrahana harena ankibon'ny tany
● Vava vita pirinty namboarina ho an'ny crano, fananganana fitaovana, milina seranan-tsambo, fandavahana
Manomboka amin'ny famolavolana ka hatramin'ny fanandramana farany, ny AOOD dia miara-miasa akaiky amin'ny mpanjifa, mahatakatra tsara ny fiasa izay ho takatry ny peratra slip sy ny tontolo iainana, jereo tsara ny antsipiriany tsirairay, hiantohana fa ny peratra prototype slip dia izay tadiavin'ny mpanjifa fotsiny.
Vokatra mifandraika: Amin'ny alàlan'ny peratra bore slip, Rantsan-tànana manokana